DF oo Kenya ugu baaqday in dib loo soo celsho xiriirkii labada dal | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo Kenya ugu baaqday in dib loo soo celsho xiriirkii labada dal
Dowladda Soomaaliya ayaa Kenya ugu baaqday in ay dib u soo celiso xiriirkii diblumaasiyadeed ee labada dal, kadib markii xiriirku meel xun gaaray bilihii la soo dhaafay.
MUQDISHO, Soomaaliya – War ka so baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa lagu sheegay in Dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay hagaajinta xiriirka Kenya, waxayna ugu baaqday in ay dib u furto safaaraddeedii ku taallay dalka.
“Waxaana sharaf u ah in aan mar kale ku celino in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay caadi ka dhigeyso xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Dowladda Fadaraalka.
“Iyadoo laga duulayo daris wanaagga, Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay ugu baaqeysaa Jamhuuriyadda Kenya in ay dib u furto howlihii diblomaasiyadeed ee ay ka wadday Soomaaliya”, ayaa sidoo kale lagu yiri waraaqda loo diray Kenya.
Sida ay Keydmedia Onlne hore u baahisay labada dhinac ayaa gaaray is fahan hor dhac ah wax ka yar toban maalin, kadib markii Dowladda Kenya joojisay duulimaadyadii Soomaaliya, hayeeshee, ay Dowladda Kenya dalbatay in DF qorto waraaqda loo yaqaan Note Verbale oo toos ugu socota Kenya, si diblumaasiyaddu u soo laabatao, taas oo Soomaaliya ugu danbeyn qortay.
Siyaasadda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, ayaa noqotay mid aan sal-fadhin tan iyo markii uu xaafiiska yimid Madaxweynaha hadda waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo, waxayna Dowaddiisu dhowr jeer Kenya ku eedeeysay in ay faragalin ku heyso arrimaha Soomaaliya.